Iwula - Ezanyisayo - Mzantsi Afrika
Le nyamakazi ithozamileyo incinane inemilenze emide, intamo encinci neengcondo. Indlebe zakhiwe okwe qanda. Isikhumba sayo sintsundu nomphantsi omhlophe. Umsila we Wula umnyama. Kwi kona zangaphakathi zamehlo kukho incindi ezijikelezileyo. Zinkunzi zodwa ezinamaphondo amafutshane, olulekileyo anobude obungama 80-180mm, aneza ringe esikhondweni.
Amanqina Angemva aphakamile kancinci kunalawo angaphambili. Amagxa wenkunzi ezindala anobude obungama 600 mm kwaye zinobunzima ubuli 14 kg. Imazi ke zona zinkulwana kune nkunzi. Iwula zithi zibonakalise ukutsiba okukhethekileyo xakuthe kwakho into ezothusayo, zithi zitsibe ngemilenze eme nqo.
Umthetho wazo zitya ingca, zithi ke maxa wambi zikhangele neentyatyambo ebizwa nge forbs. Nangona zibakho kuphela kwindawo ezime amanzi, ayixhomekekanga kuzo kuphela.
Izala ngamaxesha athile kwaye eMzantsi Afrika izala kakhulu kweyeNkanga/eyoMnga. Zimitha isithuba sentsuku ezingama 210 emvaa koko itakane elinye liye lizalwe. Amatakane ayafihlwa inyanga yonke, aze unina amane ukubuya azolincancisa. Lamatakane athi ayekiswe uncanca xa enenyanga ezine ukuya kwezintlanu.
Zifumaneka ngokwamaqela apho inkunzi enye ibane mazi ezimbini. Lamaqela anobango ngendawo kwaye enza kangangoko ukukhusela imihlaba yazo ebukhulu be 25-100 ha. Iinkunzi ezongameleyo zithi zizigxothe iinkunzi eziselula kwiqela losapho lwazo, nangona imazi ezincinci zona zihlala zide zizifumanele iinkunzi ezinokwakha usapho nazo.
Kuba kubalulekile ukugcina ubuhlobo bentlalo usapho luye lwenze umcimbi wobulongwe rhoqo, nangona oludaka luye lungahoywa emva koko.
Zihlala kwindawo ezime emanzi, ezinengca, namathafa avulekileyo kwaye naku mahlathi akrelekrele.
Indawo ezifumaneka kuzo zithe gqa gqa kwaye azizinzanga. eMzantsi Afrika iwula ifumaneka kwingingqi ze Ntshona koloni, KwaZulu-Natal, Mpumalanga, kwaye ezimbalwa ziyaqubeka ngokwanda kumntla mpuma we Free State nase Swaziland. Zinqabile empuma Caprivi yase Namibia nakumntla mpuma wase Botswana.
Igama lesi Latin: Ourebia ourebi.
Ubunzima (Imazi): 8 - 20 kg
Ubunzima (Inkunzi): 11 - 17 kg
Ubude (Imazi): 100 cm
Ubude (Inkunzi): 100 cm
Ixesha lokumitha: 7 months
Inani lamatakane: 1 takane
Iimpondo: 13 cm (record - 19 cm)
Ukuzala: Itakane elinye